ချစ်သူသိစေ | PoemsCorner
လောကမှာငါ.အတွက်တန်ဘိုးအရှိဆုံးလူကမင်း။ ငါအမောတွေနဲ.ကြုံတဲ.အခါ မင်းကရေအေးတစ်ခွက်။ ငါဒေါသတွေနဲ.ရင်ဆိုင်ရတဲ.အခါ မင်းက နှစ်သိမ်.စရာ ဖြေဆေးတစ်လုံး။ ငါ အရှုံးတွေနဲ.ရင်ဆိုင်ရတဲ.အခါ မင်းက အားဆေးတစ်ခွက်ပေါ.။ တို.နှစ်ရောက်ပျော်ရွှင်နေချိန်မှာ မင်းကစည်းချက်မှန်တဲ.တေးသွားတစ်ပုဒ်။ငါ.ဘ၀မှာလေ မင်းကမရှိမဖြစ်ပါကွာ။ ငါလေ မင်းကိုချစ်နေရမယ်ဆိုရင် ဘာမဆိုရင်ဆိုင်ရဲပါတယ်ကွာ။ ဒါပေမယ်. ခုတော.တို.နှစ်ယောက်ခွဲခွာနေရတယ်နော်။ မင်း ကိုနေ.တိုင်းလွမ်းပါတယ်ကွာ။ မင်းကိုလွမ်းတိုင်းသာ ကြယ်တွေကြွေခဲ.မယ်ဆိုရင် ကောင်ကင်မှာ ကြယ်တွေရှိတော.မယ် မထင်ဘူး။ တို.နှစ်ရောက် အတူဆုံတဲ. အခါမှ ဒီအလွမ်းစရင်းတွေကို အတူတူ ဖျက်ဆီးပြစ်ကြမယ်နော်။
#################### ။ဒို.နှစ်ရောက်ရဲ.ချစ်ခြင်းမှာ အပြစ်ကင်းစင်ပါစေသား။ #####################
တို.နှစ်ရောက် တစ်ကယ်ဝေးရဲလားချစ်သူ။ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ။ ဒီလိုပြောနေချိန်မှာသာ မင်းရှိနေမယ်ဆိုရင် ” မပြောကောင်းတာတွေ ကိုရယ် ” လ.ိုဆိုပြီး ကိုယ်.ပါးစပ်ကို မင်းရဲ.လက်ကလေးနဲ.လာပိတ်ထားမယ်ဆိုတာ ကိုသိတာပေါ.။
ကိုယ်မင်းကို ချစ်သလို မင်းလည်း ကိုယ်.ကို အရမ်းချစ်တယ်နော်။ ဒါကိုပဲ ဒို. ဂုဏ်ယူခ.ဲကြတာပဲလေ။ နီးစပ်ဖို.ဆိုတာကြိုးစားယူမှရမယ်ချစ်သူရယ်။ တို.နှစ်ယောက်ဝေးနေချိန်တွေမှာ အလွမ်းတွေကို အလုပ်တွေနဲ. သက်သေပြဘို. ကိုယ်ကြိုးစားနေတာပေါ.ချစ်သူ။ မင်းရော ကိုယ်.ကို လွမ်းနေမယ်ဆိုတာ ယုံကြည်တယ်ကွာ။မင်းကိုသနားလိုက်တာကွယ်။ မလွမ်းစေချင်ပါဘူး။ အလွမ်းတွေက ပူလောင်းလွန်းမှန်း ကိုသိတာပေါ.။ တစ်နေ.တော. ဝေးကွာချိန်တွေကို နှစ်ယောက်ပေါင်း အဆုံးသတ်နိုင်မှာပါကွာ အားတင်းထားချစ်သူ။
ဒို.နှစ်ယောက်ရဲ. ချစ်သက်တမ်း ၃ နှစ်ကျော်ခဲ.ပြီနော်ချစ်သူ။ ဒို.ရဲ.ချစ်သက်တမ်း ၃နှစ်ပြည်.တဲ.နေ.မှာ ဘုရားအတူတတ်တယ်။ပြီးတော. အမှတ်တရ ပစ္စည်းလေးတွေဝယ်ကြတယ်။ နောက်ပြီး ဘုရားဘေးနားက ဆိုင်မှာ မုန်.တွေစားကြတယ်။ အဲဒီနေ.မှာပဲ မင်းကိုကိုယ်ပေးတဲ. အနမ်းတစ်ပွင်.ဟာ အအေးမြဆုံးဖြစ်ခဲ.လိမ်.မယ်ထင်ရဲ.။ အဲဒီနေ.က မင်းမျက်နှာကအပြုံးလေး တစ်ပွင်.ကို တွေခဲ.တာကို ကိုယ်မမေ.ပါဘူးကွယ်။ တို.ရဲ.ချစ်သူသက်တမ်း ဘယ်လောက်မှာ တို. အတူတူပေါင်းစည်းနေရမလဲ။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော. ခုပဲ ပေါင်းစည်းလိုက်ချင်ရဲ.။ ဒါပေမယ်.ချစ်သူ အသီးအပွင်.တွေလိုပေါ.ကွာ အချိန်မတန်သေးရင်တော. ဘယ်ဖူးလို.ပွင်.လို. ရမလဲနော်။ ခုချိန်မှာ ကြိုးစား နေတာ ခွဲခွာနေရတာတွေဟာ တစ်နေ.မှာ မင်းနဲ.ကိုတို.ရဲ. ပျော်ရွှင်ဖွယ်မိသားစုလေး တည်ဆောက်ဖို.ပဲ မဟုတ်လား။ အားတင်းကြိုးစား တည်ဆောက်ကြဆိုနော်။
########################## ။ချစ်ခြင်းမှာ သစ္စာစောင်.စေသား။ ###########################
In: စကားပြေ Posted By: ko lin htet aung Date: Nov 28, 2010
Leave comment4Comments & 4,550 views
By: dan at Jan 3, 2011
By: atr at Jan 12, 2011
r kya like dar shin,,,
a yan pyaw phoe kaung hmar pe naw,
By: ei lay at Jun 9, 2012